Shina: Maniry An’i Confucius Hody Ny Mpiserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2012 19:25 GMT
Ny nanambarana ny fisian'ny politika vaovao amin'ny famoahana “visa” (fahazoan-dalana hiditra malalaka ao amin'ny firenena vahiny iray) ny Departemantam-panjakana Amerikana no nampitodika ny tontolom-bilaogy Shinoa tany amin'ny Ivotoerana Confucius. Mitaky ny fankatoavana Amerikana ny Ivotoerana manana endrika Anjerimanontolo araka ny toromarika vaovao, nivoaka tamin'ny 17 Mey 2012 mba ahafahan'ny manampahaizana sy mpampianatra vahiny ao aminy ho mpampianatra. Mety hipaka amin'ny fahataperan'ny “visa” ho an'ireo mpampianatra an-jatony, satria mihoatra ny 60 ny Anjerimanontolo Amerikana no mametraka ny Ivotoerana Conficius ho “vahiny nasaina” ao aminy. Etsy ankilany, maniry ny mpiserasera Shinoa fa afa-mody hampianatra ny kilonga Shinoa ny Confucius.
Fandaharan'asan-kolontsaina tohanan'ny fitondrana hampiroboroboana ny herim-panintonan'i Shina manerantany ny Ivotoerana Confucius. Miankina amin'ny Minisiteran'ny Fampianarana Shinoa izy io ary velomin'ny Sampan-draharaham-pirenena Shinoa Ho amin'ny Fampianarana Teny Shinoa Amin'ny Maha-Teny Vahiny Azy na ny Hanban. Najoro tamin'ny Novambra 2004 ny Ivotoerana Confucius ampitan-dranomasina voalohany ary talohan'ny Aogositra 2011 efa mihoatra ny 826 ny Ivotoerana Confucius sy ny Kilasy Confucius manerantany.
Modia an-trano re hampianatra ry Confucius! Sarisoritra Da Shi Xiong hita Sina Weibo
Na dia tsy nahafaly ny fitondrana Shinoa aza ity toromarika vaovao ity, dia nampamiramirana ny mpiserasera Shinoa koa. Ny Sariitatr'i Da Shi Xiong no mahalaza tsara ny fihetseham-pon'ny olona an-tserasera, ahitana ireo ankizy miangavy an'i Confucius hody an-tanindrazana hampianatra.
Maro ny mpiserasera tsotra tahaka an'i @湘客游侠 milaza ny fanekeny [zh]:
Mandany vola be loatra hamelomana ny Ivotoerana Confucius ampitan-dranomasina ny fitondrana ary manome vahana ny olona hampirina ny volany any am-paosiny [poketrany] . Nahoana no tsy mandany vola hampandehanana ny Sekolin'ny Fanantenana sy mampandroso ny fanabeazana fototra?
Nisy hafatra nampitain'olo-tsy fantatra manome fanazavana amin'ny mpiserasera ny politikam-panabeazan'ny fitondrana nivezivezy tamin'ny dinika an-tserasera shinoa be mpitsidika sy tamin'ny sehatra fifampitam-baovaon'olo-tsotra. Eto ambany ny sombin'ny lahatsoratra notsongaina avy tamin'ny BlogChina [zh]:
Misy ny sasany tezitra tamin'ny fitondrana Amerikana mandroaka ny mpampianatra ao amin'ny Ivotoerana Confucius. Saingy andao jerentsika ny paikady nametrahana ny Ivotoerana – Ampiasain'ireo manampahefana Mena ireo ny Ivotoerana Conficius ahafahana mahazo ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fitondrana Shinoa. Afa-mampianatra any amin'ireny Ivotoerana ireny ny naterak'ireo manam-pahefana ireo noho ny tanjona tokana – Mampiasa ny volan'ny mpandoa hetra hahazoany kara-maitso [monina any Etazonia]. Mody milaza ho manandratra sy mampiroborobo ny idealin'i Confucius nefa manana fandahara-potoana miafina. Manana tanjaka tokoa ny manampahefana Mena ka nahavita namotika an'i Confucius 2500 taona taty aoriana. Isaorako ny Amerikana amin'ny fampitsaharana ny Ivotoerana Confucius ka ahafahantsika mitahiry ny vola azo tamin'ny mafy.
Manome lalindalina kokoa ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka momba ny Ivotoerana Conficius ao amin'ny bilaoginy ao amin'ny ifeng [zh] ny bilaogera Cai Shenkun.
Araka ny tatitra ofisialy, mitentina dimy tapitrisa dolara amerikana isanisany ny fananganana Ivotoerana Confucius tsirairay avy. Nisanda 60.000 dolara amerikana eo ho eo ny kilasy Confucius tsirairay. Xue Yong, izay mipetraka any Etazonia amin'izao fotoana izao, manombatombana fa an-tapitrisa dolara amerikana vitsivitsy ny manangana Ivotoerana Confucius iray. Manome fampianarana toy ny kolontsaina shinoa, ny Tai Chi, ny fitsapa-pahaizana teny shinoa ny Ivotoerana. Indraindray ry zareo manohana ara-bola ny mpianatra vahiny hitsangatsangana any Shina. Ankoatra ny fananganana ny trano iorenan'ny Ivotoerana sy ny kilasy maro koa ny vola lany amin'ny fampandehanana azy. Hanome farafahakeliny 50 000 ka hatramin'ny 100 000 ho tahirim-bola fiaingana isaky ny Ivotoerana ny Hanban China. Efa notombatombanana fa farafahakeliny 25 ka hatramin'ny 50 tapitrisa dolara amerikana no lany amin'ity tetikasa ity. Ankoatra izany, tsy maintsy mandoa mpampianatra miasa feno mihoatra ny 4000 ry zareo sy mpanolotena 3000 miasa ampitan-dranomasina. Samy mandray arivo dolara amerikana isam-bolana ho fivelomany mandritra ny herintaona ny mpanolotena tsirairay avy. Nandany 36 tapitrisa dolara amerikana isan-taona amin'ny mpanolotena ao amin'ny Ivotoerana ny governemantantsika. Misy ihany koa ny karazana tahirim-bolam-panohanana maro izay tsy mazava tsara ny vola lany taminy. Ohatrinona ny vola lanin'ny vahoaka Shinoa isan-taona amin'ny Ivotoerana Confucius? Mbola tsy manana ny antontan'isa ofisialy aloha isika izao. Saingy tafakatra 1,6 lavitrisa RMB kosa ny tetibolan-dry zareo tamin'ny 2008 ary tsy mitsahatra ny misonga isan-taona izany.
Nihoatra ny 20 taona taty aoriana, 5 lavitrisa RMB ihany ny vola voangon'ny Tetikasa Fanantenana. Saingy mandany vola amin'ny fampianarana any ivelany ny fitondrana, mihoatra lavitra noho izay natokana ho amin'ny Tetikasa Fanantenana. Ahona moa izany ny tokony ataon'ny mpandoa hetra manoloana izany? Ary ny tena tsy mampino dia nipoaka ho hitam-bahoaka ny zava-manafintohina 2010 [zh] momba ny vohikala lafo indrindra [ao Shina] izay tsy iza fa ny Ivotoerana Confucius An-tserasera. Nitaky 32,5 tapitrisa RMB (tokony ho 40 tapitrisa dolara amerikana) ho fampandehanana azy ireo nahazo ny tsena tamin'izany fotoana izany. Notaterin'ny haino aman-jery taty aoriana fa ny ‘Wuzhou Network’ no nahazo ny tsena, ary ny solontena ara-dalàna amin'izany dia i Wang Yongli, izay filoha lefitry ny Hanban ihany koa. Midika izany fa ny tenany ihany no nifampiraharahan'ny Hanban, ary nirotsaka tany am-paosin'ny sasany ihany ny vola 30 tapitrisa RMB narotsaka tamin'izany. Raha tsy nivoaka tamin'ny vohikalan'ny Ministeran'ny Vola ity fifampiraharahana ity, ataoko fa tsy nisy nahalala ny ny vola lany hampandehanana ny vohikalan'ny Ivotoerana.
Nahitsin'i Jane Ellis.